Qaan-Gaarnimada Puntland iyo Qabyo aan Dhamaan – PuntlandNews24
Mahada koowaad illaaha koonka leh ayaa iska leh. Waxaa sidoo kale sharaf iyo amaan mudan isimada, waxgaradka iyo shacabka reer Puntland oo dhidibada u taagay maamul goboleed, kaasoo ay uga gol lahaayeen in ay dadkooda ka badbaadiyaan fowdada iyo maamul la ‘aanta ka dhashay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya bilwogii sagaashannaadkii. Baahida loo qabay in la helo adeeg bulsho, garsoor, amniga , dhaqaale kobcin iyo in loo gudbo hirgalinta nidaamka axsaabta badan ayaa ahaa kuwo laga dheehan karay axdi qarameedkii la qoray asaaskii maamulka Puntland. Hadaba qaangaarnimada dawladnimo oo tusaale ay u tahay sida hufan oo ay ula kala wareegeen shanta madaxweyne iyo u dabaaldagida sanadguuradii labaatanaad oo ay ka harsan tahay mudo hal sano ka yar, ma la oran karaa Puntland waxay gaartay halkii ay istaahishay? maxaase sabab u ah in laga miro dhalin waayo wacadkii ay mareen garwadeenka Puntland?
Maadaamaa horukaca ummadeed lagu cabbiro sida mamulkeedu u hufanyahay uguna adeego bulshadiisa. Dawlada Puntland oo dadku ay ka dhursugayeen mudo dheer ayaa in badan oo waxgarad ahi la amakaagsan yihiin isku milnaanta golayaasha dawliga ah kuwaasoo dhumiyay qaab dhismeedkii sharciyeed ee loo dhisay ee ahaa in midba midka kale la xisaabtamo.Gudosho la’aanta waajibaadkii loo igmaday iyo luminta hanaanka dawladnimo ayaa meesha ka saartay dhawrista xuquuqda bulsho iyo midii sharciyeed.
Hirgalinta sharciga iyo geedi socodka dimuqraadiyada oo halbawle unoqon lahaa horumarka maadaama ay horseedi lahaayeen hogaan ku yimaada rabitaanka shacabka ayaa in badan oo waxgaradka Puntland ay aaminsan yihiin in lagu hungoobay oo la hagraday.Waxaa dhab ah in maamulka hada jira uu ku guul daraystay bixinta mushaharaadka ciidamada, taasuna ay keentay in amnigu wadanku uusan ahayn mid lagu kalsoonaan karo. Dilalka qorshaysan iyo dhamaan falalka argagixiso ee ka dhaca deegaanadeena ayaa ah ka gaabin ay dawladu ka gaabisay tayaynta iyo daryeelka ciidamada qalabka sida.
khayraad kala duwan ee Putland sida kaluunka, xijiga, xoolaha nool, beeraha iyo macdanta dhulka ku duugan ayay ahayd in looga faa’iidaysto koboca dhaqaale oo muhimad wayn uleh bixinta xuquuqda shaqaalaha, dhawista amniga iyo abuurista fursado shaqo oo loo sameeyo ardada jaamacadaha iyo da’ yarta soo koraysa.
Dakhliga dawlada ka soo gala dekadaha, ayraboorada iyo heshiisyada caalamiga ah ee lala galo shirkadaha shisheeye oo ay ugu dambaysay mashruuca DP-WORLD ayaan looga faa’iidaysan sidii la rabay ama lama musuqmaasuqay. Taasi waxay meesha ka saaray dhawrista daryeelkii asaasiga u ahaa bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo in la helo biyo nadiif ah.
Hoos udhaca dhaqaale oo ay sababtay musuqmaasuq baahsan oo ka jira hay’ada dawlada ayaa caqabad ku noqday horumarka dhaqan-dhaqaale iyo bulsho ee hadafkii iyo himilooyinkii loo asaasay dawlada Puntland.
Ku guuldaraysiga kobcin iyo kabid dhaqaale ayaa sabab unoqday in dawladu la timaado makiinado lacag u daabaca kuwaasoo saamayn ku yeeshay nolosha danyarta xoogsatada ah oo awalba la tacaalayay bixinta khidmadaha iskoolada gaarka loo leeyahay iyo daryeelka caafimaad ee caruurtooda oo ahaa adeegyo la rabay in dawladu kafaalo qaado.
Hadaba sida ku cad heshiiskii iyo axdigii la saxiixay asaaskii Puntland oo ujeedadiisu ahayd ka xoroobida wax kasta oo hor istaagi kara sharaf ku noolaanshaha bulshada isku isirka ah iyo dhamaystirka dawladnimo taam ah ayaa noqday ”fari kama qodna faanoole” wax kaqabad la’aanta arimaha asaasiga u ah jiritaanka ummada ayaa loo sababayn karaa hufnaan la’aan iyo musuqmaasuq baahsan oo ka jira hay’adaha dawliga ah. Puntland malaha maxkamad dastuuri ah oo tayaysan sidaa darteed waxaa caado noqotay in dawladii timaadaba ay udhaqanto ”la jiifiyaana banaan” iyadoo markaa meel marsanaysa hadba qaabka ay rabto inay ula tacaasho wixii caqabado ka hor yimaada. Si loo xal waara iyo midnimado Puntland waxaa laga maarmaan ah in la dhagaysto tabashada shacabka sidoo kalena la helo xeerbeegto ka jid bixisa tubta loo dhaqaaqayo.Baarlamaanka oo lagu soo doorto wadaninimo, hufnaan iyo alle ka cabsasho ayaa waxay fure unoqon kartaa in shacabka iyo dawlada Puntland ay gaaraan halka ay istaahilaan.
Dr Mohamed Salad Ali
Founder and President Bay Valley Internal Medicine LLC